नेपाली कम्यूनिष्टहरु महानायक, नायक हुँदै खलनायक बनेर सकिदैछन् : रायमाझी जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
नेपाली कम्यूनिष्टहरु महानायक, नायक हुँदै खलनायक बनेर सकिदैछन् : रायमाझी
जनबोली/ ९ चैत, काठमाडौ । एकीकृत नेकपा माओवादी संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझीले नेपालका कम्यूनिष्टहरु पहिला महानायक त्यसपछि नायक र अन्तमा खलनायक भएर सकिने गरेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य नगरेसम्म पार्टी एकता असम्भव रहेको दावी गरेका छन ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले नेपालमा कम्यूनिष्ट पार्टीहरु सिद्धान्त भन्दा पनि ब्यक्तिगत अहमता र स्वार्थका कारण फुटेको दावी गरे । क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा उनले भने–नेपालका कम्यूनिष्टहरु विचार र कार्यदिशाका कारण कम फुटेका छन । पहिला फुट्ने अनि पछि विचार र कार्यदिशामा फरक छुट्याउने परम्परा छ ।
रायमाझीले कम्यूनिष्टहरु कम्तिमा पनि क्रान्ति गर्न प्रगतिशिल पुजीबादी चरित्रको हुनु पर्नेमा नेपालका कम्यूनिष्टहरु निम्न पुजिबादी चरित्रका भएको आरोप लगाउँदै यो दृष्टिकोणबाट उन्मुक्ती दिएर एकता गर्न सकिने बताए । नेपालका कम्यूनिष्टहरुमा पहिला महानायक,नायक हुँदै खलनायक बनेर सकिने फुटबादी परम्परा रहेको भन्दै त्यो परम्परा हटाएपछि पार्टी एकता हुन सक्ने बताए ।
उनले माक्र्सबाद, लेनिनबाद र माओवादले अहिलेको सामाजिक अन्र्तविरोधलाई समाधान गर्न नसकेकोले अन्तर्राष्ट्रिय कम्यूनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको भन्दै आजको अन्र्तविरोध र रणनीति बनाएर एकता गर्नु पर्ने तर्क गरे । रायमाझीले भने–बाह्र बुँदे सम्झौता गरेर काग्रेस र एमालेको झण्डामुनीबाट १९ दिने आन्दोलन गर्ने निर्णय माओवादको होईन । हिजोको बादले मात्रै आजको समस्या समाधान हुँदै सुत्र घोकेर हुँदैन ।
कम्यूनिष्टहरुवीचको एकता अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै छ माओवादी विचारधारी पार्टीहरुवीच एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमै एकता हुने दावी गरे । उनले मोहन बैद्य पनि प्रचण्डकै नेतृत्वमा आउने बताए ।
क्रान्तिकारी कम्यूनिष्ट पार्टीका महासचिव मणी थापाले मुलुकमा पछिल्लो परिवर्तन माओवादी धारले गरेको भए पनि त्यो आन्दोलन विघठन र विचलनमा परेकोले समस्या उत्पन्न भएको भन्दै प्रचण्डले त्यसलाई स्विकारेकोले आफूहरु प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टी एकता गर्न तयार भएको बताए । उनले भने–प्रचण्डले गल्ती स्विकारेर परिवर्त सहित आएकोले प्रचण्डको नेतृत्व स्विकारेको हो । यो नै मुल धार हो ।
थापाले कमजोर भएर एकता गर्न खोजेको नभई साझा मुद्दाहरु गुम्दै गएकोले त्यसलाई बचाउन एकता गर्न लागेको भन्दै साम्राज्यबादलाई पराजित गर्न पनि बाम एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य गर्न बामपन्थीका भित्री भूमिका रहे पनि तयसलाई नबुझदा बामपन्थीहरु टुक्रा टुक्रा हुन पुगेको बताए । नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हस्तबहादुर केसीले नेपाली क्रान्तिलाई सफल बनाउन पार्टी एकताको प्रयास थालिएको भन्दै तत्काल पूर्ण पार्टी एकता भने सम्भव नरहेको जिकिर गरे ।
उनले भने–जनवादी क्रान्तिलाई सफल बनाउन तत्काल विशाल कम्यूनिष्ट केन्द्र बनाउनु पर्छ । हाम्रो जनवादी क्रान्ति र एमाओवादीको पुजिबादी क्रान्ति विच विवाद छ । त्यसैले पनि एकताको लागि समय लाग्छ । केसीले बर्तमान सत्ताले माओवादीहरुलाई पेल्न खोजेकोले पनि उपलब्धिलाई रक्षा गर्न कार्यगत एकता हुने बताए । क्रान्ति सम्पन्न नभएसम्म जतिवटा संविधान बनाए पनि केही नहुने भन्दै चुनावको लागि मात्रै एकता सम्भव नहुने तर्क गरे ।
नेकपा एकीकृतका पोलिट ब्यूरो सदस्य सीताराम तामाङ्गले पार्टी एकता अहिले नै टाढाको विषय भएको भन्दै कार्यगत एकता गरेर परिवर्तनलाई सस्थागत गर्न आन्दोलनमा जाने स्पष्ट पारे । उनले कम्यूनिष्ट आन्दोलनको उर्वर भूमि नेपाल भए पनि आफूहरु अलग अलग अवस्थामा रहेकोले एक पटक आफैलाई पछि फर्किएर हेर्न आवश्यक रहेको मा जोड दिदै अग्रगमनकारीलाई दमन गर्न खोजीएकोले आफूहरुले चैत १४ गते अन्र्तक्रिया र २३ गते देशब्यापी विरोध गर्ने गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको जानकारी दिए ।
उनले आफ्नो पार्टी र नेकपा–माओवादीवीचको एकता भने अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाललीले सत्ता र संख्याको फाईदाको निम्ती छ माओवादी पार्टीवीच एकताको कुरा उठेको दावी गर्दै सिद्धान्त निष्ठ भएर कुरा अघि बढाए मात्रै एकता हुन सक्ने बताए । पार्टी एकताको कुरा ठिकै भए पनि माओवादीहरुको आधार माक्र्स, लेनिन र माओवादीको धारा नै गलत भएको टिप्पणी गरे ।
उनले कम्यूनिष्ट एकताको लागि ६५ वर्षको कम्यूनिष्ट आन्दोलनको समिक्षा, विदेशीहरुको दृष्टिकोणको ब्याख्या, विस्तारबादको ब्याख्या, समाजको चरित्रको विश्लेषण, जियोपोलिटिक्सको ब्याख्या हुनु पर्ने भन्दै पुजिबादलाई समाप्त गर्न लागे अर्को परिवर्तन आउन नसक्ने दावी समेत गरे । मैनालीले बलियो शक्तिको बुई चढेर कमजोरमाथि प्रहार गरेको परिणाम अहिले मुलुकले भोगीरहेको भन्दै यस विषयमा माओवादीले सोच्नु पर्ने बताए ।
नेकपा संयूक्तका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर जोसीले पार्टी फुट किन भयो भन्ने कुराको जरा पत्ता नलगाई एकताको कुरा गर्नु हास्यास्पद भएको भन्दै १५० वर्ष अघि लेखेको माक्र्सबादको कुरा गर्दै यो समयको चेतना स्तर कहा पुग्यो भनेर हेर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले भने–अटोमेसनको यूगमा मजदुर बर्गको कुरा गरेर कतै पुग्न सकिदैन । अपरमिडिल क्लासको बाहुल्य रहेको कम्यूनिष्ट आन्दोलनले सिद्धान्तका विषयलाई लागु गर्न सक्दैन । गर्न सक्ने भए मनमोहन अधिकारी, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएत खोई सर्वहारा वर्गको अधिनायकबाद लागु गर्न सकेको ?
बन्दुकबाट अब सत्ता कब्जा हुन नसक्ने भएकोले आजको आवश्यकता बुझी एकताको आधार तय गर्न सुझाव दिदै समाजबाद उन्मुख कार्यक्रमलाई स्विकार्नु पर्ने जोशीले बताए ।
उनले करोडको गाडी र लाखौका पलङ्गमा सुत्ने कम्यूनिष्ट हुनै नसक्ने आरोपसमेत लगाए ।